यी हुन् सूर्य ग्रहणका बेला गर्न नहुने १२ काम | Rajmarga
पुस १० गते बिहीवार खण्डग्रास सूर्य ग्रहण लाग्ने भएको छ । नेपाली समय अनुसार बिहान ८ बजेर ४२ मिनेट देखि ११ बजेर ३१ मिनेटसम्म सुर्य ग्रहण लाग्नेछ ।
सूर्य ग्रहणका बेला चन्द्रमा अस्त हुने साथै बुध, वृहस्पति र शनि पनि अस्त रहने छ । सुर्य ग्रहणका बेला सूर्य, चन्द्र, बुध, बृहस्पति, शनि र केतु धनु राशिमा एकसाथ रहने छन् ।
जसले गर्दा केही अप्रत्यासित घटनाक्रम बढाउन सक्ने, रोगको संक्रमण बढ्न सक्ने लगायतका विपरित फलको भय समेत हुनेछ । यस पटकको सुर्यग्रहण नेपाल, भारत लगायतका एसियन देश सहित यूरोप, अस्ट्रेलिया, पूर्वी अफ्रीकामा देख्न सकिनेछ ।
ग्रहणको सुतक समय पुस ९ गते साझँ ५ बजेर ४८ मिनेटबाट शुरू भई पुस १० गते बिहान ११ बजेर ३१ मिनेटमा सूर्य ग्रहण समाप्त भएपछि मात्र सकिनेछ ।
सूतक बार्नु पर्ने कारण
ग्रहण लागेको बेला सूतकको बिषेश महत्व हुन्छ । हिन्दु धर्म अनुसार ग्रहणको सूतक काल शुरु भएपछि कुनै पनि कार्य गर्नुहुदैन । यस अवधिमा कुनै पनि शुभकार्य गर्न बर्जित गरिएको छ । सूतक काललाई अशुभ समय मानिन्छ ।
ग्रहण लागेको बेला गर्न नहुने कार्य-
2 thoughts on “यी हुन् सूर्य ग्रहणका बेला गर्न नहुने १२ काम”
Pingback: भोलि सुर्य ग्रहण, सार्वजनिक विदा छ कि छैन ? - Rajmarga
Pingback: आज सूर्यग्रहण लाग्दै, कुन समयमा कहाँबाट देखिनेछ ? - Rajmarga
Previous post: चिनियाँ प्रहरीको सूचनाकै आधारमा चिनियाँ नागरिक पक्राउः सीआईबी
Next post: बलिउडकी चर्चित गायिका आशा भोस्ले काठमाडौंमा, यस्तो छ कार्यक्रम